Ao indray no hoe hametraka politika hisarihana ny mpamatsy vola vahiny, ka rehefa atao mora ve no alaintsika, 1% ho an'ny Malagasy ary 99% ho an'ny vahiny, tsy ho avy izy? Omena azy koa ny tany mba hampisy sécurité des investissements, na atao bail emphytéotique 99 ans, izany hoe mpanofa tsy azo roahina ao anatin'ny 99 taona.
Dia tsotra ny havaliko azy, raha manana manga marobe ianao nefa tsy takatrao, na tsy manana ny tekinika hakana azy ianao, dia alaivo ny voasary takatrao amidio, dia mividiana tohatra hiakaranao ny manganao, dia rehefa lafonao indray ilay manga somary aty ambany, dia ampio échafaudage indray hiakaranao avoavo kokoa, sady mihinana manga ianao, no mihinana voasary, izay tsy lany amidinao.
Raha azavaina ara-tekinika, dia io ilay antsoina hoe effet de levier, fanao izy io eo amin'ny tsenam-bola, izany hoe mametraka 1 million de dollar ianao, dia afaka mampiasa 100 millions de dollars.
Izay no ilana Banky Malagasy ahafahanao manao an'izany, fa tsy hiankina amin'ny banky vahiny lava.
Izany hoe raha te hibata entana mavesatra ianao, dia asianao bao lava, ka apetrakao ery amin'ny tendrony ny entana, arakaraky ny maha lava ny levier na ny bao, no mahamora zakaina ilay entana. tsy hoe nihamaivana ny entana, fa ny levier nampiasainao no lava.
(Sary fitrandrahana Solika Tsimiroro Bloc 3104)
Salon des Industries de Madagascar: Lancement du label économique « MALAGASY NY ANTSIKA » »